TPLF Oo Soo Bandhigtay Maxaabiis Ka Tirsan Ciidamada Dowladda
ADDIS ABABA(Wararka Maanta)-Xoogagga TPLF ee gobolka Tigray ayaa soo bandhigay kumannaan maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada Itoobiya.
Maxaabiistan ayaa badankood la sheegay inay u hoggaansameen ciidamada TPLF. Qaarkood ayaa la soo qaaday, halka kuwo kalena ay ku duubneyd faashad uu dhiig ku yaallo.
Ciidamada Tigray ayaa dhowaan kuwa dowladda Itoobiya kala wareegay magaalada Maqalle, iyadoo dagaalka gobolka ka dhacay uu saameyn ba’an ku yeeshay bulshada.
Malaayiin qof ayaa ka barakacday gobolka, iyadoo ciidamada dowladda Itoobiya lagu eedeeyay inay tacaddiyo ka geysteen gobolka Tigray.
Dhawaan ciidamada dowladda ayaa isaga baxay Maqalle iyada oo ay dib ula wareegeen xoogagga jabhadda TPLF.
Xukuumadda ra’iisul wasaare Abiye Axmed ayaa ku dhawaaqday xabbad joojin hal dhinac ah oo ka dhacda gobolka Tigray hase yeeshee waxaa weli jira walaac laga qabo in gobolkaasi ay ka dhacaan iska hor imaadyo u dhexeeya labada dhinac.
Diyaarad Sidday 90 Ruux oo Ku Burtburtay Filibiin
Wararka Maanta : Itoobiya oo sharuud ku xirtay diyaaradaha ka dagaya gobolka Tigray -...